SingForYou.net - Asone Mel Myaw Lint Chet
Asone Mel Myaw Lint Chet
Tags : sithu..sfy
By : sithunaung on May 17, 2010
Categories: Rock/Pop Duets
Score: 153 Rating: 4.94 Comments: 33
Asone Mel Myaw Lint Chet's Description
~~~နောက်ထပ်မရှိတော့တဲ့~~~စွန့်လွတ်အချစ်နဲ့ချစ်တယ်~~~THANK YOU ALL~~:))))
MinWai on May 28, 2010 0
very good, brother! I Like it **********
Thanzinchitthu on May 18, 2010 0
ဖီလင်အပြည့်နဲ့ ဆိုထားတာ အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ် bro ရေ...အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ဗျာ...really perfect ...5*******************for bro .
u4gyi on May 18, 2010 0
နားထောင်လို့အရမ်းကောင်းပါတယ်,,, Bro, STN yay ရေ~~အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်~*****~းP~~))
hippo on May 18, 2010 0
really nice to listen par bro sithunaung yay ... ***** for your great singing ...
thant on May 18, 2010 0
Kg tal so tar htet ko.........amyarr gyi po kg tal........bro sithu yay.......********
turikimuriki on May 18, 2010 0
NICE ONE AS ALWAYS BRO* * * * *
naymin15 on May 18, 2010 0
bro ရေ...ကောင်းလွန်းတယ်ဗျ..အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးပါ...အားးပေးနားဆင်ရင်ခံစားသွားပါတယ်***********
pp01 on May 18, 2010 0
Wow...fullmood lay nae sing thwer tar.. so perfect par shint:D*****
paradise on May 18, 2010 0
ဝမ်းနည်းစရာ သီချင်းလေးကို ပီပြင်အောင်ဆိုသွားနိုင်လို့ ~~နားထောင်ရင်းနဲ့ အတူလွမ်းသွား ပါတယ်
whitekisslay on May 18, 2010 0
Speechless singss&great attachment par palzz bro g yaytt....luv it luv itt:*:*:*:*:*:*Million:)sannmya narr sinn twer par p nor:>>>>>>>
Zarmaung on May 18, 2010 0
kg lite tar byar...so htar tar Shal bea'..mite hma mite..arr pay nar sin twar par tal..:bravOOO ******************for bro Sithunaung
jpkglay on May 18, 2010 0
ဒီသီချင်းကို ရေလည်ကြိုက်တယ်... ဘရိုရေ... ဆိုထားတာ ကောင်းတယ်ဗျာ.... မိုက်တယ်....
kyalsinlinn on May 18, 2010 0
အားရိုရို....အရမ်းကိုမိုက်တယ်ဘရာစာ..ရှိတူ ကြီးရေ...ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ..သိပ်အားမပေးဖြစ်ဘူးဗျာ...ဒီနေ့ တော့...အားပေးသွားပီ အီတိုချီး...ညီလေး..အငယ်ဆုံး လာရောက်အားပေးနားဆင်သွားပီဗျို့ ....ဘယ်တော့ဆိုဆိုလန်ထွက်နေတာပဲ..ညီ့လေးအစ်ကိုကြီးကတော့...
aungtun1 on May 18, 2010 0
that's brilliant singing of you,, bro sithu....really Cool...you are fantastic vocalist,,,, *************************
sumyar on May 18, 2010 0
a yan kg tal bro sithu yay...d song lay koayan like tal..khan sar chat shi thu tway for pop naw...
nawsis on May 18, 2010 0
susu23 on May 18, 2010 0
nice to sing bro yay arr pay thwar tel naw******
chitmoe2009 on May 18, 2010 0
clover on May 18, 2010 0
arr pay thwar tal naw :D
snowgirl on May 18, 2010 0
L lunn warr song ko paing paing naing naing sing thwar tae bro L si thu yay :D cha noe gal lay arr pay thwar par dal shin ;clap; ;clap;dkal pal sunt luttachit nae love tawt mal pop :? khan sarr chakapyay nae sing thwar darayan ko kg par dal shin ******* :)
maung309 on May 18, 2010 0
Ko Sithu yay... very very nice par....*******
susannyunn on May 18, 2010 0
this is my veri veri favy..... no wordzzzz to say coz u sang it emotionally , beautifully n brilliantly ....xo ... more than perfect ....!!!!! BRAVOOOOOOOO... million starz for uuuuuuu my bro g C2 g >>>>>>
sithunaung on May 18, 2010 0
~ဒီသီချင်းကို SFY မောင်နှမတွေဆိုသွားကြတာကို နားထောင်ရင်းကြိုက်သွားတာပါစစ်ကြီး melody နဲ့ lyris ကလည်းလှတယ်~အားပေးနားဆင်သွားတာကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် sis g ရေ~~:))
koaungkhaing on May 18, 2010 0
အကိုကြီးအလုပ်မသွားဘူးလားလို့ မနေ့က ညီစည်သူ ကိုယ့်ကို မေးသလို ပြန်မေးလိုက်ရမလား... နားထောင်ရတာ အေးအေးငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ သိပ်ကောင်းပါတယ်...
ညီ့ဆီမှာညလေအကိုကြီး~ အလုပ်ကပြန်လာပြီဗျ~အားပေးနားဆင်သွားတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro g koaungkhaing ရေ~:))
brownlay on May 18, 2010 0
ayann cool tal bro sithu... arr pay thwar dal nawt.... aso paing thaw bro Sithu atwat *************s myar!!!!!!!
အားပေးနားဆင်သွားတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis brownlay ရေ~:)))
KiddY-EML on May 18, 2010 0
;) yann kg tal kwarrrrr 5***********
~ဂယ်ပြောတာလားဗျာ~~းP~~အားပေးနားဆင်သွားတာကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် sis kiddy ရေ~:))
romeo on May 18, 2010 0
bro sithu yay..this is awsome....
thz alot bro romeo ~~:))
soramoe on May 18, 2010 0
bro) Sithu TaCharTaYouteSiMharLar pyi tawt AsoneMelMyawLintChet ~ so htarr tar tway arr lone kaung hla chi lar ~ de thi chin lae nyeint2 lay nae' so htar tar taw2 kaung tal ~
ဦးဦးဖျားဖျားအားပေးနားဆင်သွားတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis soramoeရေ~~:))
Feedback : 18
Subscribe to sithunaung